विहान उठ्ने बित्तिकै भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ५ काम !
काठमाडौं । के तपाईं विहान उठ्दा जहिले पनि खराब मुडमा हुनुहुन्छ ?
उठ्ने वित्तकै तपाईंको शरीर निक्कै कमजोर हुन्छ । राति सुत्दा सबै शक्ति निस्क्रिय हुने भएका कारण शरीर कमजोर हुन्छ । उठ्नै वित्तिकै गह्रौं काम वा जिम गर्न थाल्नु हुँदैन । विहान तपाईं के गर्नु हुन्छ भन्ने कुराले तपाईं दिनभरी कस्तो रहनुहुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । विहानमा गरिएका गल्तीले दिनभरी नै मुड अफ गरिदिने र समस्या हुने समेत हुन्छ । उठेपछि केही छिन खुला हावामा जानुस् । हल्का मन तातो पानी पिउनुस् र केही बेरमा शरीर स्फुर्त भएपछि मात्र गह्रौं काम गर्नुस् ।
आइतबार ३, साउन २०७८ ६:२३:१८ मा प्रकाशित